अब यी १० देशबाट नियमित उडान हुने ! - jagritikhabar.com
अब यी १० देशबाट नियमित उडान हुने !
विभिन्न १० वटा देशबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै आएको छ । कुवेत, मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी, चीन, टर्की, श्रीलङ्का, भारत र सिङ्गापुरबाट नियमित उडान हुँदै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ ।
अफ्रिकी मुलुकमा देखा परेको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन युरोप र एसियाका मुलुकमा फैलिँदै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई कडाइ गर्न सुरु गरेको छ ।
यसअघि अध्यागमन विभागले अमेरिका र बेलायतलगायत ६७ मुलुकबाट आउनेलाई अनिवार्य आफ्नै खर्चमा ७ दिन होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय २४ घण्टा नपुग्दै फिर्ता गरेको छ ।